Ileta Evela KwiQumrhu Elilawulayo LamaNgqina KaYehova | Incwadi Yonyaka Ka-2015
“Sisoloko simbulela uThixo xa sinikhankanya nonke emithandazweni yethu, kuba asiwulibali umsebenzi wenu wokuthembeka, nokubulaleka kwenu niqhutywa luthando, nokunyamezela kwenu ngenxa yethemba eninalo eNkosini yethu uYesu Kristu phambi koThixo uBawo wethu.” (1 Tes. 1:2, 3) La mazwi ayichaza kakuhle indlela esivakalelwa ngayo ngani! Siyambulela uYehova ngenxa yenu nangomsebenzi omhle eniwenzayo. Kutheni sisitsho?
Kulo nyaka uphelileyo benixakekile nisenza ‘umsebenzi wokuthembeka nokubulaleka niqhutywa luthando’ ngenxa yoBukumkani. Uninzi lwenu luye lwazama iindlela zokwandisa ubulungiseleli. Abanye baye bayokukhonza kwimimandla nakumazwe ekufuneka abavakalisi abangakumbi kuwo. Abanye baye bandisa ubulungiseleli babo ngokushumayela esidlangalaleni. Abanye baye baba ngoovulindlea abangabancedani ngexesha leSikhumbuzo, ngenyanga yotyelelo, ukanti nangephulo elikhethekileyo langoAgasti 2014. Nangona iimeko zenu zingafani, kodwa siyabona ukuba niwenza ngomphefumlo uphela umsebenzi kaYehova yaye siyanincoma ngaloo nto. (Kol. 3:23, 24) Simbulela ngenene uYehova ‘ngomsebenzi wenu wokuthembeka’!
Sikuxabisa ngokungazenzisiyo ‘ukusebenza kwenu niqhutywa luthando’ ekwakhiweni kwezakhiwo ezahlukahlukeneyo zokunqula ezisehlabathini lonke. Ezo zakhiwo zingxamisekile kuba kaloku liqhubeka lisanda inani labantu bakaYehova. (Isa. 60:22) Cinga nje, kulo nyaka uphelileyo abavakalisi bebeyi-8 201 545, ngoxa izifundo zeBhayibhile bezimalunga ne-9 499 933 ngenyanga. Ngenxa yolu lwando, iiofisi zesebe ezininzi kuye kwafuneka zandiswe okanye zilungiswe. Oku kuthetha nokuba kufuneka iiHolo zoBukumkani ezingakumbi! Kusekho neeofisi zokuguqulela ezifunekayo kwezinye iindawo ukuze abaguquleli bakwazi ukuhlala baze basebenze kwindawo ulwimi lwabo oluthethwa kuyo.
Ngoko ke, sinokuzibuza, ‘Ndingancedisa njani ekwakhiweni kwezi zakhiwo?’ Abanye bethu banokukwazi ukuba ngamatsha-ntliziyo xa kusakhiwa. Enoba uyakwazi ukwakha okanye akunjalo, sonke sinelungelo elikhulu lokuxhasa lo msebenzi ubaluleke kangaka. (IMize. 3:9, 10) Ngexesha lokwakhiwa komnquba, amaSirayeli anikela kakhulu kangangokuba ade anqandwa. (Eks. 36:5-7) Loo mizekelo iseBhayibhileni nakanjani iyasichukumisa yaye iyasikhuthaza. ‘Ukusebenza kwenu niqhutywa luthando’ kule misebenzi ibalulekileyo yenkonzo engcwele, sesinye isizathu sokumbulela kwethu uYehova!
Sinesizathu esikhethekeliyo sokuchulumanca ngenxa yokubona indlela abanyamezela ngayo abazalwana bethu. Ngokomzekelo, makhe sithethe ngabazalwana bethu abathandekayo baseMzantsi Korea. Ukususela ngo-1950, abazalwana abaselula kweli lizwe baye bafumana izigwebo ezahlukahlukeneyo kuba bengavumi ukwaphula umthetho kaYehova. Izizukulwana zabazalwana bethu ziye zanyamezela oku. Lo mzekelo wabo wokunyamezela uyaluqinisa ukholo lwethu!
E-Eritrea, abazalwana bethu abathathu baye bavalelwa iminyaka engaphezu kweyi-20. Abanye, kuquka oodade nabantwana babo baye bavalelwa ixesha elincinane. Mininzi imizamo eyenziweyo ukuze bakhululwe, kodwa ayikabikho ephumeleleyo. Abazalwana bethu abakamlahli uThixo. Baye bema nangona bephethwe kabuhlungu. Asibalibali aba bazalwana banyanisekileyo xa sithandaza.—Rom. 1:8, 9.
Kuyinyaniso kona ukuba abaninzi benu abavalelwanga ngenxa yokholo lwabo. Nakuba kunjalo, uninzi lwenu luneengxaki zokwaluphala, impilo enkene-nkene, ukuchaswa ngamaqabane angakholwayo okanye izalamane, kanti neengxaki okanye ubuthathaka obaziwa ngabo bodwa. Sekunjalo, nisaqhubeka nimkhonza uYehova ngokuthembeka! (Yak. 1:12) Siyanincoma kakhulu. Ukunyamezela kwenu ngolo hlobo sesinye isizathu sokumbulela kwethu uYehova.
Ngenene, ukuthembeka kwenu, ukubulaleka niqhutywa luthando nokunyamezela, ezo zizizathu ezihle zokuba ‘sibulele kuYehova kuba ulungile.’ (INdu. 106:1) Sinithanda nonke ngokungazenzisiyo yaye siyathandaza kuYehova ukuba anomeleze, aniphe amandla nokuba anisikelele ukuze nimkhonze ngonaphakade.